Ireto misy fomba 6 manampy ny fitomboan'ny fandraharahana amin'ny finday | Martech Zone
Rehefa mihena ny fotoana fivelaran'ny fivelarana sy mampihena ny vidin'ny fampandrosoana ny drafitra zanatany finday dia nanjary tsy maintsy ananan'ireo orinasa maro ny fanavaozana finday. Ny fananganana ny rindranasa findainao manokana dia tsy mandany vola na mandoa vola toy ny tamin'ny roa taona lasa izay.
Ny famokarana ny indostria dia orinasam-pampandrosoana fampiharana misy ivon-toerana manokana sy mari-pankasitrahana, mahery setra amin'ny fananganana rindranasa orinasa izay misy fiatraikany tsara amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasao.
Ahoana no ahafahan'ny fampiharana finday mampitombo ny orinasanao
Hanitatra ny tobin'ny mpanjifanao - Tsy fantatrao mihitsy raha hivadika ho firenena malaza any amin'ny firenena lavitra ny vokatrao na serivisinao eo an-toerana. Rindrambaiko fivarotana finday tsy mampino, rindranasa finday milamina afaka mitondra fitomboana iraisam-pirenena ho an'ny orinasanao. Tsy izany ihany fa azonao atao ny manao ny fivezivezena fampiharana finday any ivelany koa!
Asandrato ny fifamoivoizana sy ny fanentanana amin'ny marika - Fampiharana finday mahasoa sy tsy mampino mametraka ny lohanao amin'ny sainao. Ny rindranasa finday dia afaka mitondra fifantohana amin'ny fantsona omni, eny fa na dia ny fitaterana ny fifamoivoizana sy ny fiovam-po hiverina amin'ny tranokalanao, tranokala ecommerce, na fantsona sosialy.
Ampitomboy ny fampiroboroboana ny mpanjifa - Ny rindranasa finday dia matanjaka lavitra noho ny tranokala finday, miaraka amin'ny fidirana amin'ny serivisy misy ny toerana, eo akaikin'ny serasera an-tsaha, ny haingam-pandeha, ny fakantsary, ny mikrôfônia ary ny fitaovana biometrika aza. Afaka manolotra fifanakalozana sy fifampiraharahana bebe kokoa amin'ny marika izany.
Manatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa - Ampitomboy ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanolorana tsipika mivantana ho fanohanana amin'ny alàlan'ny rindranasa findainao. Na click-to-call, chat, fizarana efijery, serivisy fanampiana, na horonan-tsary mifampiresaka aza, ny orinasanao dia afaka manatsara ny fifandraisan'ny mpanjifa.
Hatsarao ny tombam-bidinao - Tsy toy ny biriky sy feta lafo vidy, ny fisoratana anarana finday dia mijanona 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro, ary 365 andro tsy misy ny taona. Ny rindranasa finday dia afaka miditra amin'ny poketra finday ihany koa, manome fomba tsotra hanomezana alalana ny fividianana.
Fifandraisan'ny mpiasa - Indostria iray mitombo dia manangana rindranasa anatiny ho an'ny mpiasa ho an'ny fikarohana, antontan-taratasy ary ny fifandraisana anatiny. Izany dia mitarika fanavaozana amin'ny orinasa lehibe kokoa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fifandraisana sy ny fanodinana ireo sakana amin'ny lalana.
Ahoana ny amin'ny famonosantsika!
Tsy misy olona afaka mandà fa ny rindranasa finday dia afaka manome hery ny orinasanao. Manana hevitra momba ny fampiharana finday ve ianao?
Tags: fanentanana marikafiaraha-mientan'ny mpanjifaSerivisy ho an'ny mpanjifaFifandraisan'ny mpiasamanitatra ny tobin'ny mpanjifamampitombo ny vola miditraatsangano ny fifamoivoizanafinday fampiharanafampiharana findayfampivoarana findayFidiram-bola